बैदेशिक रोजगारमा जानेले जानी राखौ :कुन देशमा कुन खोपलाई अनुमती छ ? – List Khabar
Home / समाचार / बैदेशिक रोजगारमा जानेले जानी राखौ :कुन देशमा कुन खोपलाई अनुमती छ ?
बैदेशिक रोजगारमा जानेले जानी राखौ :कुन देशमा कुन खोपलाई अनुमती छ ?
admin July 23, 2021 समाचार Leaveacomment 129 Views
को’रोना सं’क्रमण पछि रोकिएको वैदेशिक रोजगार हाल सम्म पुरानो गतिमा फर्कन सकेको छैन । कतिपय देशले कोरोनाको खोप लगाएको ब्यक्तिलाई आफ्नो देशमा प्रवेश अनुमती दिइसकेको छ । कतिपय देशले आफुले अनुमती दिएको खोप लगाएको अवस्थमा मात्रै देशना प्रवेश दिने जनाएको छ ।
यता नेपाल सरकारले पनि बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालिको हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना खोप दिन सुरु गरिसकेको छ । हेर्नुस बैदेशिक रोजगारिमा जाने केही देशको कोरोना खोपको अवस्था ।
गत डिसेम्बर ८ मा बेलायतमा ९० वर्षीया वृद्धा मार्गरेट कीनान परीक्षण सकिइसकेपछि पहिलोपटक खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति बनेकी थिइन् । बेलायतमा एस्ट्राजेनिका, जोनसोन एन्ड जोनसोनको खोपलाई मान्यता दईएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा डिसेम्बर १४ बाट कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो । यो मुलुकले फाइजर र बायोएनटेक तथा चिनियाँ कम्पनी सिनोफर्मले विकास गरेको कोरोना खोपलाई सार्वजनिक प्रयोगको अनुमति दिएको छ ।
डिसेम्बर १४ मा नै अमेरिकाले फाइजरको कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अमेरिकाले न्युयोर्क सहरका क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने नर्सहरुलाई सबैभन्दा पहिला यो खोप दिएको थियो । फाइजरले अहिलेसम्म अमेरिकालाई २० करोड डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको छ । अमेरिकाले मोडर्नाले विकास गरेको अर्को कोरोना खोपलाई पनि अनुमति दिइसकेको छ ।
क्यानडामा गत डिसेम्बर १४ मा ८९ वर्षीया महिलालाई फाइजरको खोप लगाउँदै कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । क्यानडाले मोडर्नाको कोरोना खोपलाई पनि सार्वजनिक प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ । बिहीबार मोडर्नाको खोपको पहिलो चरणको खोप पनि क्यानडा आइपुगिसकेको छ ।
५. साउदी अरेबिया
अरब मुलुकहरुमा कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेको साउदी अरेबियाले डिसेम्बर १७ देखि मुलुकमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले डिसेम्बर १९ मा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै मुलुकमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । इजरायलले फाइजरको कोरोना खोपलाई सार्वजनिक प्रयोगको अनुमति दिएको हो ।
कतारले फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेको कोरोना खोपको पहिलो चरणको आपूर्ति भएसँगै कतारले डिसेम्बर २२ बाट कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो । कतारले मोडर्ना र अक्सफोर्ड तथा एक्स्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना खोप खरिदको लागि पनि सम्झौता गरिसकेको छ ।
मेक्सिकोले बिहीबारबाट कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मेक्सिकोले सबैभन्दा पहिला नर्सहरुलाई कोरोना खोप दिने कार्यतालिका बनाएको छ । मेक्सिकोले फाइजरको तीन हजार डोज खोप मुलुकमा आइपुगेसँगै खोप कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
सर्बियाले पनि बिहीबारबाट मुलुकमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री एना ब्रानबिकले फाइजरको कोरोना खोप लिँदै कोरोना खोप कार्यक्रमको सुरुआत गरेका हुन् ।
कुबेतले पनि बिहीबारबाट कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कुबेतले फाइजरले विकास गरेको एक लाख ५० हजार डोज कोरोना खोप पाइसकेको छ ।
चिली ल्याटिन अमेरिकामा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने मेक्सिकोपछि दोस्रो मुलुक बनेको छ । बिहीबारबाट चिलीमा कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो । बिहीबार राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नर्सलाई कोरोना खोप लगाउँदै चिलीमा खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
रुसले गत सेप्टेम्बरदेखि आफ्ना नागरिकहरुलाई कोरोना खोप दिइँदै आएको बताएको छ । रुसी कम्पनीले विकास गरेको स्पुतनिक भी खोप आफ्ना नागरिकहरुलाई दिइँदै आएको रुसले बताएको छ । गत अगष्ट १३ मा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्पुतनिक भीलाई कोरोना खोपको अनुमति दिएका थिए । यद्यपि त्यतिबेला यो खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सकिएको थिएन । यो खोप संक्रमण नियन्त्रणको लागि ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी गरिएको छ ।
कोस्टारिकामा पनि बिहीबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ । कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडोले खोप कार्यक्रमको सहयोगमा यो महामारीको अन्त्य हुने बताए ।
Previous विश्वका टप २० एयरलाइन्सको सूची सार्वजनिक, सबैभन्दा सुरक्षित कतार एयरवेज
Next जीवनमा दुश्मनी गर्न नहुने ९ प्रकारका मानिसहरु